War Horse(2011) – Channel Myanmar
PG-13 2011 146 min Drama, History, War
အခုတငျပေးမှာကတော့ လူနဲ့တိရစ်ဆာနျအကွား ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ မိသားစုခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ စဈ၏သဘောတရား စတဲ့ ခံစားမှုရသမြိုးစုံပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားနာမညျကတော့ အပျေါကအတိုငျး War Horse ပါ..
Jurassic Park, Jaws စတဲ့ တိရစ်ဆာနျဦးစားပေးဇာတျကားတှေ၊ Saving Private Ryan၊ Schindler’s List၊ စတဲ့ စဈပှဲဦးစားပေးဇာတျကားတှကေို ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ နာမညျကွီး ဒါရိုကျတာ Steven Spielberg က ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ…
စာရေးဆရာကွီး Michael Morpurgo ရဲ့ နာမညျကြျော War Horse စာအုပျကို မှီငွမျးရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး ပထမကမ်ဘာစဈအတှငျး
နိုငျငံအသီးသီးက အသုံးပွုခဲ့တဲ့ မွငျးပေါငျး ရှဈသနျးကြျောရဲ့ သနားစရာဘဝကို တဈကောငျတညျးနဲ့ ကိုယျစားပွု ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ…ပွီးတော့ Loki မငျးသား Tom Hiddleston နဲ့ Sherlock Holmes မငျးသား Benedict Cumberbatch တို့ကလညျး အားဖွညျ့ကူညီထားပါတယျ….
ပထမကမ်ဘာစဈမစမီ အင်ျဂလနျပွညျမှာ လယျထှနျဖို့အတှကျ မွငျးတှကေို အသုံးပွုခဲ့တာပါ…ဈေးတှမှော မွငျးတှကေို လလေံဆှဲရောငျးခရြာကနေ ဇာတျလမျးရဲ့ အဓိကဇာတျကောငျဖွဈတဲ့ Joey ဆိုတဲ့မွငျးလေးကို Ted Narracott ဆိုတဲ့လူက ဝယျယူခဲ့ရာက စတာပါ…လယျထှနျတတျတဲ့ မွငျးဝယျရမယျ့အစား စဈမွငျးလေးကို ဈေးကွီးပေး ဝယျခလြာတဲ့ Ted တို့ မိသားစုမှာ ပွဿနာမြိုးစုံတကျတော့တာပါပဲ…ဒါပမေဲ့ Ted ရဲ့သားဖွဈသူ Albert က မွငျးလေးကိုကောငျးကောငျးမှနျမှနျသငျကွားပေးပွီး ပွဿနာအခြို့ကို ကြျောလှားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဒီမွငျးလေးကို စဈတပျကို ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ…ဒီလိုနဲ့ ပထမကမ်ဘာစဈမှာ မွငျးလေးကို အသုံးပွုဖို့ဖွဈလာခဲ့ပွီး သူ့ကိုအရမျးခဈြတဲ့ Albert ကတော့ မွငျးလေးနဲ့ ဝေးဖို့ဖွဈလာခဲ့ရာကနေ သူ့ရဲ့မွငျးလေးနဲ့ ပွနျတှဖေို့ ကွိုးစားခဲ့ပုံတှကေို ရိုကျကူးထားတာပါ…စဈပှဲအတှငျး မွငျးတှကေို အမြိုးမြိုးအသုံးခပြုံတှေ၊ စဈသားတှရေဲ့ ခကျထနျမှုတှေ၊ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ စဈသားတှရေဲ့ ခဈြစဖှယျအပွုအမူတှေ၊ စဈပှဲတှငျးအဖွဈအပကျြတှကေိုတခမျးတနား ကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈတာမို့
Channel Myanmar ပရိသတျကွီးလညျး အကွိုကျတှမေ့ယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ…
စဈကားလညျးဖွဈတဲ့အပွငျ ဒါရိုကျတာ Steven Spielberg ရဲ့ လကျရာဆိုတော့ ထှထှေထေူးထူးညှနျးစရာမလိုတဲ့အပွငျ
အမှတျတရလေးသိမျးထားစဖေို့အတှကျ Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p တို့ဖွငျ့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါသညျ….
ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ Paing ပဲဖွဈပါတယျ….
အခုတင်ပေးမှာကတော့ လူနဲ့တိရစ္ဆာန်အကြား ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မိသားစုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စစ်၏သဘောတရား စတဲ့ ခံစားမှုရသမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ အပေါ်ကအတိုင်း War Horse ပါ..
Jurassic Park, Jaws စတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဦးစားပေးဇာတ်ကားတွေ၊ Saving Private Ryan၊ Schindler’s List၊ စတဲ့ စစ်ပွဲဦးစားပေးဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်…
စာရေးဆရာကြီး Michael Morpurgo ရဲ့ နာမည်ကျော် War Horse စာအုပ်ကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း
နိုင်ငံအသီးသီးက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မြင်းပေါင်း ရှစ်သန်းကျော်ရဲ့ သနားစရာဘဝကို တစ်ကောင်တည်းနဲ့ ကိုယ်စားပြု ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်…ပြီးတော့ Loki မင်းသား Tom Hiddleston နဲ့ Sherlock Holmes မင်းသား Benedict Cumberbatch တို့ကလည်း အားဖြည့်ကူညီထားပါတယ်….
ပထမကမ္ဘာစစ်မစမီ အင်္ဂလန်ပြည်မှာ လယ်ထွန်ဖို့အတွက် မြင်းတွေကို အသုံးပြုခဲ့တာပါ…ဈေးတွေမှာ မြင်းတွေကို လေလံဆွဲရောင်းချရာကနေ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Joey ဆိုတဲ့မြင်းလေးကို Ted Narracott ဆိုတဲ့လူက ဝယ်ယူခဲ့ရာက စတာပါ…လယ်ထွန်တတ်တဲ့ မြင်းဝယ်ရမယ့်အစား စစ်မြင်းလေးကို ဈေးကြီးပေး ဝယ်ချလာတဲ့ Ted တို့ မိသားစုမှာ ပြဿနာမျိုးစုံတက်တော့တာပါပဲ…ဒါပေမဲ့ Ted ရဲ့သားဖြစ်သူ Albert က မြင်းလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ကြားပေးပြီး ပြဿနာအချို့ကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီမြင်းလေးကို စစ်တပ်ကို ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ မြင်းလေးကို အသုံးပြုဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူ့ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ Albert ကတော့ မြင်းလေးနဲ့ ဝေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရာကနေ သူ့ရဲ့မြင်းလေးနဲ့ ပြန်တွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေကို ရိုက်ကူးထားတာပါ…စစ်ပွဲအတွင်း မြင်းတွေကို အမျိုးမျိုးအသုံးချပုံတွေ၊ စစ်သားတွေရဲ့ ခက်ထန်မှုတွေ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စစ်သားတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ်အပြုအမူတွေ၊ စစ်ပွဲတွင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုတခမ်းတနား ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တာမို့
Channel Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
စစ်ကားလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ရဲ့ လက်ရာဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းစရာမလိုတဲ့အပြင်
အမှတ်တရလေးသိမ်းထားစေဖို့အတွက် Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p တို့ဖြင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်….
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Paing ပဲဖြစ်ပါတယ်….
File Size :(2.4GB) and (1GB)
Quality : Blu-Ray 1080p 5.1 CH, Blu-Ray 720p
Translated by Paing
Adam Somner Anna Worley Steven Spielberg
Benedict Cumberbatch David Kross David Thewlis Eddie Marsan Emily Watson Jeremy Irvine Nicolas Bro Peter Mullan Toby Kebbell Tom Hiddleston
Anian Zollner Benedict Cumberbatch Celine Buckens David Kross David Thewlis Eddie Marsan Emily Watson Geoff Bell Hannes Wegener Hinnerk Schönemann Irfan Hussein Jeremy Irvine Julian Wadham Liam Cunningham Maggie Ollerenshaw Markus Tomczyk Matt Milne Maximilian Brückner Michael Kranz Nicolas Bro Niels Arestrup Patrick Kennedy Peter Benedict Peter Mullan Philippe Nahon Pip Torrens Rainer Bock Robert Emms Seamus O'Neill Sebastian Hülk Toby Kebbell Tom Hiddleston Tony Pitts Trystan Pütter
Option 1 usersdrive.com 2.4GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option2usersdrive.com 1GB Blu-Ray 720p
Option3yoteshinportal.cc 2.4GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option4yoteshinportal.cc 1GB Blu-Ray 720p
Option5yuudrive.me 2.4GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option6yuudrive.me 1GB Blu-Ray 720p
Option7megaup.net 2.4GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 8 megaup.net 1GB Blu-Ray 720p
Option9mega.nz 2.4GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 10 mega.nz 1GB Blu-Ray 720p
Option 11 upstream.to 2.4GB Blu-Ray 1080p 5.1 CH
Option 12 upstream.to 1GB Blu-Ray 720p
Daddy Issues (2018) 2018
[18+] Good Model2(2017)
Here and Now (2018) 2018
D-Day (2015) Complete Seires 2015
The Thin Red Line(1998) 1998
Hate Story3(2015) 2015
The Unjust (2010) 2010
Whisper of the Heart (1995) 1995
Aiyaary (2018) 2018
Ema (2019) 2019
Your Name (2016) 2016
Lawyer Lawyer (1997) 1997
Phra Apai Mani (2002) 2002